Wednesday January 13, 2016 - 19:06:07 in Articles by Super Admin
Waagacusub.info - Wasaaradda Warfaafinta Somalia ayaa qosol iyo yaab taariikhiya ka dhacay kadib markii seddex maalmood oo biyo la-aan ka taagneed kadib uu albaabka Wasaaradda soo galay dameer biyo sida .
Waagacusub.info - Wasaaradda Warfaafinta Somalia ayaa qosol iyo yaab taariikhiya ka dhacay kadib markii seddex maalmood oo biyo la-aan ka taagneed kadib uu albaabka Wasaaradda soo galay dameer biyo sida . Tan iyo burburkii 1991 ,ma dhicin in Wasaaradda Warfaafinta dameer biyo u dhaamiyo balse dhacdadaan foosha xun waxeey muuqaal ka bixineysaa ninka loo magacaabay Wasiirka Warfaafinta qofka uu yahay.
Dameerka biyaha siday markii uu soo gelaayay Wasaaradda Warfaafinta waxaa horkacaayay Wasiir Xayir Maareeye oo ku qeeylinaayay "Maanta kadib biyo la-aan idinkuma dhaceeyso,dameerkaan ayaan la soo heshiiyay oo idiin dhaamin doono"
Shaqaalaha Wasaaradda ayaa sheegay in lacagtii biyaha lagu bixin lahaay uu cunay oo lunsaday Wasiir Maareeye ,taas oo sababtay in lix bilood kadib Shirkaddii biyaha goosato.
Wasiir Maareeye wuxuu xitaa kireeystay guryahii ay Wariyeyaasha seexan jireen ee Wasaaradda ku dhex yiil taas oo dad badan ka yaabisay.
Sikastaba ha ahaatee, Wasaaraddaha Dowladda Federalka Somalia waxeey noqdeen NGO uu ku qaraabto qofka looga dhigay Wasiir ee laga sugaayay waxqabad loo aayo.
Fadeexo weyn ayaa hareeysay Wasiirka Amniga Cabdirisaq Cumar Maxamed kadib markii uu xilka qaadis ku sameeyay Agaasimihii Mashruuca Qaranka Kooshin Cabdi Xaashi Cabdullahi oo ah wiil uu dhalay Xildhibaan Cabdi Xaashi. Full Article